Hardware Design & Engineering Indawo - Electronics Design Ukukhiqiza
Hardware Design Izikhungo
Sesikhathele umlingani wakho nezimo kusukela umqondo ukuze kokuqala zokukhiqiza!
Hardware Design & Ubunginiyela
Moko has ubuchwepheshe oqinile esishunyekiwe ukuthuthukiswa hardware, ezifana Inthanethi Izinto(IoT) design, kuhlanganise hardware design software design. Ngodondolo egcwele PCB onjiniyela nabaqambi, siyihlomele ngokuphelele ukuhlangabezana nezidingo zakho.
PCB wokuhlelwa kwendikimba futhi Isakhiwo
Kuye izidingo zakho, onjiniyela bethu sizoxoxa electronics izakhiwo umkhiqizo wakho emhlanganweni iphrojekthi, bese ukhetha ofanele kakhulu electronics izakhiwo.
Ukukhetha Uphiko kuyinqubo ezibucayi olwenza wesifunda ukwenza operation wawo ahlose ukuba usetshenziswe. Onjiniyela bethu kuzoqinisekisa yezingxenye ziqu, ukunciphisa izindleko, kanye nomklamo for manufacturability.
PCB Design kanye Isakhiwo Development
Nge PCB olubanzi amasevisi design yethu, kwendikimba bamba isipiliyoni kanye nomtapo, Moko uyoqinisekisa ukuthi umklamo wakho manufacturable(DFM), ngisho nezingxenyana 0201 obujwayelekile kanye 0.1mm-iphimbo BGAs.
Ukuhlola & lokulungisa inkinga
Moko uzoqalisa ukusebenza uchungechunge scan ngesikhathi sesigaba design layout ukukhulisa isivivinyo Ukusabalala. Siphinde ukuthuthukisa uhlelo test, BIST futhi ukuhlolwa zalapho ukuyohlolwa iphutha sibonelo ababebuthene, ngaleyo ndlela ukuqinisekisa ukulethwa isethi prototype lihlolwe ngokugcwele futhi ukulungele amandla i-nokuhlola ukusebenza.
Moko inikeza amaklayenti ayo inombolo encane prototypes evivinywa okusheshayo sokwenza isisekelo.
Moko inikeza professional isitifiketi / ukuhambisana test amakhasimende. Sisebenzisana nezinhlangano SGS futhi UL ukunikeza UL, ETL, EC, I-FCC, RoHS isitifiketi ngokuvumelana nezimfuneko ezithile amakhasimende '.
Moko kuyinto zobunjiniyela futhi inkonzo Manufacturing Inkampani nge ithimba abanamakhono futhi abanolwazi onjiniyela mechanical inikeza ephelele amasevisi design mechanical ukuthi udinga ukwakha umkhiqizo omusha, noma uvuselele futhi sithuthukise i design ekhona. Leveraging zamuva CAD ubuchwepheshe, singakwazi acwenge yesifunda yokwandisa design yakho mechanical ukuze isebenze, manufacturability futhi ezishisayo izingqinamba.